China, Kurume 24, 2011 NeChishanu, Nyamavhuvhu 24, 2012 Lorraine Bhora
Semutongi weM 2011 Mira Awards, ndakave nemukana wekupedza musangano wezuva nevasunguri, vagadziri, mapurogiramu uye vatungamiriri vebhizimusi vachiita zvakakosha muhunyanzvi hwedu hwehunyanzvi. Kunyangwe ini ndisingakwanise kukuudza kuti vanokunda ndivanaani, uchafanirwa kuenda kumitambo yeMira mwedzi unouya, ndinogona kukuudza kuti pane zvinhu zvinofadza zviri kuitika pano. Sezvaungatarisira, zhinji dzemharidzo dzaive pamusoro peiyo tekinoroji.
CHITANGIDZO Svondo rakapera, ini ndaive pane rimwe dunhu kuThe Combine - 2010 inonzi Go West: Vaimbove Midwesterners vakatamira kuSilicon Valley vanogovana nyaya dzavo. Ini ndaive mumwe wevanhu vana vaikurukura zvedu nyaya dzega uye zvakamutsa dutu remoto paTwitter ndokuenda Katsi 4 apo Doug Karr akatumira maitiro ake paakadzokorora Mubatanidzwa 2010 pano. Manzwiro ese aya aipembedzwa chose kupihwa hunhu husina kudzika hwefomati, iri